रोजगार - नारी
बार टेन्डरमा अवसर
पछिल्लो समय बार टेन्डरमा अवसर खोज्नेहरू बढ्दै गएका छन् । काठमाडौं सीतापाइलाकी कञ्चन महर्जनलाई जुनसुकै सीप सिके पनि आफू आत्मनिर्भर हुने हो भन्ने लाग्छ । उनी परिवार र समाजको सोच परिवर्तन गर्न चाहन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘ड्रिंक्सलाई हामी नराम्रो तरिकाले बुझ्छौं तर यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकियो भने औषधिजस्तै हो । यसले स्टामिना र आत्मविश्वास बढाउनुका साथै सिर्जनशील हुन पनि सघाउँछ । मुख्य कुरा त यसले आफूलाई स्वरोजगार हुन सहयोग पु¥याउँछ ।’बारटेन्डिङ कला सिकिरहेकी चितवनकी नमुना थापा विदेशमा यो पेसालाई निकै सम्मान गरिन्छ र राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले आफूले यो तालिम लिइरहेको बताउँछिन् । अस्टे«लिया जाने तयारीमा रहेकी उनी उता गएर पनि यही पेसालाई निरन्तरता दिने बताउँछिन् ।नेपालमा बारटेन्डिङ प्रशिक्षण नयाँ हो । आधा दशकअघिदेखि बारिस्ता तालिम उपलब्ध भए पनि बारटेन्डिङ भने नयाँ भएको ट्रिकी एण्ड टिप्सी बारटेन्डिङ बारिस्ता एकेडेमीका संस्थापक एवं प्रबन्ध निर्देशक विनोद खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँ अहिले प्रशिक्षण लिने विद्यार्थीहरूको चाप बढिरहेको छ, त्यसमा महिलाको संख्या धेरै छ । सन् २०२० मा स्थापना भएको ट्रिकी एण्ड टिप्सीले ८० प्रतिशत व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्छ ।ट्रिकी एण्ड टिप्सीका निर्देशक विजेयन्द्र सिंह रावत भन्छन्–‘बारटेन्डिङमा हामीले ४० देखि ४५ दिनको कोर्स डिजाइन गरेका छौं भने बारिस्ताका लागि २५ देखि ३० दिनको विशेष कोर्स छ । बारटेन्डिङमा हामी १५ दिने विशेष सुविधायुक्त इन्टर्नसीप पनि विद्यार्थीलाई प्रदान गरिरहेका छौं ।’ जोरपाटीकी स्नेहा आचार्य हातमा सीप बढाउन आफू बारटेन्डिङ प्रशिक्षणका लागि यहाँ आएको बताउँछिन् । स्नेहा भन्छिन्–‘अहिले संभ्रान्त घरानाका युवतीहरू पनि यो सीप सिक्न आइरहेका छन् । अल्कोहल भन्दा पनि अहिले थोरै मात्रामा अल्कोहल राखेर विभिन्न फ्रुट्स फ्लेबर र फ्रेस जुस मिक्स गरी बनाइएको कक्टेल टे«न्डमा छ । यो खाँदा स्वास्थ्यलाई कुनै नोक्सानी हँुदैन र कामको थकानबाट केही क्षणका लागि रिफ्रेस पनि भइन्छ । जे कुरा बजारमा माग छ त्यो सीप आफूसँग भयो भने सहजै स्वरोजगार हुन सकिन्छ ।’ट्रिकी एण्ड टिप्सीबाट पासआउट भइसकेका विद्यार्थीलाई तोकिएको तालिम अवधि सकिसकेपछि पनि त्यहाँ आएर प्राक्टिकल गर्ने छुट छ । त्यति मात्रै नभएर यहाँ तालिम लिएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क इन्टर्नसीप र स्वदेश तथा विदेशमा जब प्लेसमेन्टको सुविधा भएको खड्काले बताए । फ्रि स्किल डेभलपमेन्टअन्तर्गत मिसेस नेपाललगायत विभिन्न सेलिब्रेटीले प्रशिक्षण दिइरहेको र यसले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा मद्दत पु¥याएको खड्काको दाबी छ । सोह्रखुट्टेकी विपना महर्जन अहिलेका अभिभावक छोरीहरूको मामिलामा निकै उदार र बुझ्ने हुँदै गएको बताउँछिन् । उनले भनिन्–मलाई मेरै अभिभावकले यो कला सिक्न पठाउनुभएको हो । यसको स्कोप देखेरै म यहाँ आएकी हुँ ।’ पछिल्लो समय बारटेन्डिङ प्रशिक्षणमा युवतीहरूको आगमन निकै उत्साहजनक रहेको रावतको भनाइ छ । उनी भन्छन्–‘समय सँगै अहिलेको लाइफस्टायलमा निकै परिवर्तन आइरहेकाले यो सीपले युवापुस्तालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न ठूलो सहयोग पु¥याउ“छ ।’ चुनौतीमा रमाउने नोरयाङ डोमा गुरुङ बार टेन्डर नयाँ र महिलाका लागि चुनौतीपूर्ण पेसा भएकाले यतातर्फ आफ्नो रुचि बढेको बताउँदै भन्छिन्–‘हामी युवामा परिवर्तन ल्याउने शक्ति हुन्छ । हामीले सुरु नगरे कसले गर्ने ? हाम्रै कारण आगामी पुस्तालाई पुरुष हावी रहेको पेसामा आउन सहज हुन्छ भने किन सुरुवात नगर्ने ? यही सोचले म यो सीप हासिल गर्न आएकी हुँ ।’
नारी संवाददाता , जेष्ठ २५, २०७९
कोरोना महामारीपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ । हरेक कुरा भर्चुअल हुन थाले । भर्चुअल कक्षा, भर्चुअल मिटिङ, भर्चुअल कुराकानी, भर्चुअलश्राद्ध आदि । कोरोनाबाट सुरक्षित रहन सामाजिक दूरी अपनाउनुपर्ने भएकाले पनि हरेक कुरा भर्चुअलमै सीमित रहे ।
नारी संवाददाता , मंसिर १०, २०७७
फूल खेतीप्रति महिलाको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अहिले कुल व्यवसायीमध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् । सरकारले व्यावसायिक महिलाका लागि अनुदान दिन थालेपछि फूल व्यवसाय गर्न महिलाहरू उत्साही भएका छन् ।
प्रकृति दाहाल, चैत्र ११, २०७६
बार टेन्डरमा महिला
मदिरापान हिजोआज स्वाभाविक र सामाजिक हुन थालेको छ । फलत:मदिरा पानका लागि रात्रिकालीन बार र रेस्टुराँ सञ्चालनमा वृद्धि हुँदैछ । यस्ताबारमा पछिल्लो समय महिलाहरूको आकर्षण पनि बढ्दैछ । महिलाहरू नै बार टेन्डरका रूपमा स्थापित हुन थालेका छन् ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १८, २०७६
महिलाहरूलाई अटो मेकानिक तालिम
हेटौंडा १५ र १८ मा ५–५ जना महिलाको समूह बनाई संचालन गरिएको तालिममा कुल ७ जना दलित र ३ जना जनजाति महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ । आवश्यक प्रविधि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अबको केही दिनमै सहयोग गरिसकिने बताएको छ भने तालिमका सहभागी महिलाहरू ग्यारेज स्थापनाका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्न थालिसकेका छन् ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १३, २०७६
फुडमारियो खानपानसम्बन्धी एप्स हो । यसलाई हामी युवाहरूले विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसले घरको भान्सामा बनेका खानेकुरा ग्राहकसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ । फुडमारियोमाअहिले दैनिक करिब ४ सय ५० अर्डर आउँछ । यो एप्स डाउनलोड गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । यसले गर्दा पनि व्यस्त समयमा खाना–खाजा आदिको अर्डर गर्न सहज भएको छ ।
रोहित तिवारी, संस्थापक फुडमारियो मंसिर ५, २०७६
काम दिन होस् वा कामदार खोज्न अहिले एप्सहरू सक्रिय हुँदै गएका छन् । रोजगारीको क्षेत्रमा समेत प्रविधिले फड्को मारेको छ । नेपालमा श्रीयोग डटकम, भेटायो डटकम, मेरो जब्स, कुमारी जब्स, जब्स नेपाल, मेरो रोजगारी, नेपाली जब्स आदि एप्सले कामदार खोजिदिनेदेखि रोजगारी उपलब्ध गराउने कामसम्ममा सक्रियता देखाउँदै आएका छन् ।
प्रकृति दाहाल, श्रावण ३०, २०७६
नारी संवाददाता , असार ३०, २०७६
पठाओ र टुटलले दिलायो रोजगारी
टुटलले महिलाहरूसँग कमिसन नलिने र राइडबापत बोनस पनि पाइने हुनाले महिलाहरूका लागि यो पेसा आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको सुनुवार बताउँछिन् । साधन हुनेहरूले चाहना हुँदा बेरोजगार बस्नु नपर्ने उनको दाबी छ । भीम माया भन्छिन्–‘आँट र साहस गर्‍यो भने यो एप्सबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
प्रकृति दाहाल, असार २२, २०७६
अहिले कानुनी शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । देशमा संघीयता लागू भएसँगै कानुनप्रतिको क्रेज थप वृद्धि भएको जानकारहरू बताउँछन् । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएसँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म कानुनको आवश्यकता भएकाले पनि कानुनी शिक्षामा आकर्षण बढेको हो ।
नारी संवाददाता , जेष्ठ २७, २०७६
मन्टेश्वरी शिक्षा हिजोआज हाम्रो चासोको विषय बन्नुका साथै विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गसमेत भएको छ ।
कल्पना अधिकारी, शिक्षक एवं मन्टेश्वरी ट्रेनरमाघ ९, २०७५